Bazophuma benyinyitheka yizipho kwiNtandokazi eJozini | IOL Isolezwe
Bazophuma benyinyitheka yizipho kwiNtandokazi eJozini
Isolezwe / 7 June 2012, 11:33am /
UNkk Vuyi Gama wakwa-Inecto uzobe enza adume ngazo zokucobelelisa abantu besifazane ukuthi bangazigcina kanjani bebahle eJozini
NGEKE bazisole nakancane abesifazane abazobe behambele umcimbi omkhulu ohlelwa yiSolezwe, Intandokazi Women’s Club.
Lo mcimbi okuzobe kuboshelwe kuwo abesifazane abanamagalelo ehlukene empilweni, uzobe usehhotela eligudle iJozini Dam okuyidamu eliheha abaningi ngenxa yobukhulu bayo nobuhle bokukakwa yizintaba, iJozini Tiger Lodge, eJozini ngoJuni 9.
Konke sekumi ngomumo ngalo mcimbi njengoba izipho zizobe ziyindathane, imbokodo ezobe iwuhambele ezozihlomulela ngazo.
Ngokusho kukaNksz Precious Gumede weSolezwe, izipho zizobe ziziningi njengoba lokhu kuhambisana nokuthi leli phepha ligubha iminyaka eyishumi lasungulwa.
Izipho ezihlanganisa amawashi akwaHallmark, izitsha zakwaTupperware, microwave, amaketela, ayina, amahempa avela ebhange Ithala, awakwa-Inecto, Spekko Rice nama-CD ahambisana nama-DVD eqembu lomculo wokholo iJoyous Celebration ngezinye zezipho abantu besifazane abazoba kulo mcimbi abazozititilizela zona.
“Konke sekumi ngomumo kulo mcimbi. Kuningi esikuphathele imbokodo ezoba kulo mcimbi wethu wesibili kulo nyaka futhi osazohambela nakwamanye amadolobha,” kusho uNksz Gumede.
Kulo mbuthano wabesifazane kusuke kuhlomiswana, kwakhiwana, kuthuthukiswana ngezinto eziningi ezithinta imbokodo njengoba izikhulumi ezisuka eMinyangweni kahulumeni nasezikhungweni ezahlukene zisuke zethula izinkulumo.
Uhlelo kulo mcimbi luzobe luphethwe yintokazi esizakhele igama emkhakheni wezamabhizinisi uNksz Zama Phakathi.
Izikhulumi ezifana noNkk Bridgette Shabangu woMnyango wezoBulungiswa KwaZulu-Natal, Vuyi Gama oyinxusa lakwa-Inecto nezikhulumi zaseThala bazobe beshiyelana inkundla.
Umculi we-jazz waseMlazi uMelody naye uzothokozisa imbokodo ngezingoma zakhe ezahlukene njengoba kunguye ozonandisa ngokudla komphefumulo.
UNksz Gumede uthe kubantu besifazane akade befisa ukuba yingxenye yalo mcimbi, sekumele balindele olandelayo ngoba izikhala zokungena seziphelile.
Phakathi kwabaxhasi balo mcimbi wangoMgqibelo singabala uMnyango wezoBulungiswa KwaZulu Natal, Ithala nabakwa-Inecto.